တစ်ဦးကဂျာစီကင်းလွတ်ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းရေးအကြီးအကျယ်အချို့ပြင်သစ်ပြုပြင်မွမ်းမံနှင့်အတူအင်္ဂလိပ်ဘုံဥပဒအပေါ်တွင်အခြေခံထားပါသည်။ ၎င်း၏ဥပဒေပြုဥပဒေများ 1948 ၏ဂျာစီကုမ္ပဏီများဥပဒေအားဖြင့်ပြင်ဆင်ထားပြီးဖြစ်သော 1991 ၏အင်္ဂလိပ်ကုမ္ပဏီများအက်ဥပဒေဖြစ်ကြသည်။
နိုင်ငံတကာစီးပွားရေးနှင့်ကုန်သွယ်ရေးနှင့်အတူပါဝင်ပတ်သက်ဂျာစီကုမ္ပဏီများသည် "ကင်းလွတ်ခွင့်" ကုမ္ပဏီများမှအဖြစ်လူသိများကြသည်နှင့်ဂျာစီအတွင်းကုန်သွယ်မှုသို့မဟုတ်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းမှာထိတွေ့ဆက်ဆံလို့မရပါဘူး။ တစ်ဦးကသာမန်နေထိုင်သူဂျာစီကုမ္ပဏီအခွန်ကင်းလွတ်ခွင့်သည်မဟုတ်။
ဂျာစီပြင်သစ်နှင့်အင်္ဂလန်တို့အကြားတည်ရှိသော Channel ကိုကျွန်းများတစ်ခုဖြစ်သည်။ အဆိုပါ Channel ကိုကျွန်းများ 1066 ကတည်းကယူနိုက်တက်ကင်းဒမ်း၏ထိန်းချုပ်မှုအောက်မှာရှိခဲ့ပါပြီ။ နိုင်ငံရေးအရ, ဂျာစီတရားဝင်ယူနိုက်တက်ကင်းဒမ်း၏တစ်စိတ်တစ်ဒေသသည်မဟုတ်, ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဖြစ်သောမဟုတ်ဘဲဗြိတိသျှသရဖူမူတည်တယ်။
• နိုင်ငံခြားရေးပိုင်ဆိုင်မှုတွေကိုဖြည့်: နိုင်ငံခြားသားများကုမ္ပဏီအတွက်ရှယ်ယာအားလုံးပိုင်ဆိုင်နိုင်ပါတယ်။
• အဘယ်သူမျှမအခွန်ကောက်ခံမှု: ဂျာစီအတွင်း၌စီးပွားရေးလုပ်ငန်းမဆိုအမျိုးအစားအတွက်ဆက်ဆံမဟုတ်ကင်းလွတ်ခွင့်ကုမ္ပဏီများသည်အဘယ်သူမျှမကော်ပိုရိတ်အခွန်ပေးဆောင်။ ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းဝင်ငွေအခွန်အခြားနိုင်ငံများတွင်အခွန်ထမ်းမိမိတို့၏အစိုးရများမှထုတ်ဖော်ကြဘူးအဖြစ်သို့သော်အမေရိကန်အခွန်ထမ်းအားလုံးကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာဝင်ငွေ IRS ကိုမှထုတ်ဖော်ရပေမည်။
• နှစ်ဦးကရှယ်ယာရှင်များမှာ: နိမ့်ဆုံးလိုအပ်ချက်ထည့်သွင်းဖို့နှစ်ခုရှယ်ယာရှင်များဖြစ်ပါတယ်။
• တစ်ခုမှာဒါရိုက်တာ: တစ်ဦးတည်းသာညွှန်ကြားရေးမှူးထည့်သွင်းရန်လိုအပ်ပါသည်။
• အနိမျ့ဝေမျှမယ်မြို့တော်: 1 GBP ၏တစ်ဦးကနိမ့်ဆုံးလိုအပ်သည့်အခွင့်အာဏာဝေစုမြို့တော်ဖြစ်ပါတယ်။
• အင်္ဂလိပ်: ဗြိတိသျှသရဖူမှီခိုမှုအဖြစ်, အင်္ဂလိပ်က၎င်း၏တရားဝင်ဘာသာစကားဖြစ်ပါတယ်။
လူသိများတဲ့ Multi-အမျိုးသားရေးကုမ္ပဏီများအပါအဝင်အမည်များကြိုတင်ရေးသားထားသောသဘောတူညီချက်လိုအပ်သည်။ အမည်များကိုတရားမဝင်လှုပ်ရှားမှုများဆိုလိုလို့မရပါဘူး။ အမည်များရေးသားထားသောသဘောတူညီချက်မပါဘဲအစိုးရသို့မဟုတ်ရှိမရှိဒေသခံသို့မဟုတ်နိုင်ငံခြားတော်ဝင်ပြည်ခိုင်ဖြိုးဆိုလိုလို့မရပါဘူး။ အဆိုပါစကားလုံး "အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ" သာနိုင်ငံတကာကကုန်သွယ်မှုပေးသောကုမ္ပဏီများကသုံးနိုင်တယ်။
ကုမ္ပဏီအမည်များကို English သို့တစ်ဦးလုံလောက်သောဘာသာပြန်ချက်လျှောက်လွှာနှင့်အတူထည့်သွင်းသောအခြေအနေပေါ်လက်တင်အက္ခရာကိုအသုံးပြုပြီးမည်သည့်ဘာသာစကားတွင်ရှိနိုင်ပါသည်။
ဘဏ်, ချေးငွေများ, ငွေစု, လူ့အဖွဲ့အစည်းကိုတည်ဆောက်ခြင်း, အာမခံချက်, အာမခံ, ကောင်စီ, စီးပွားကူးသန်း၏အခန်းထဲက, သမဝါယမ, ဘဏ္ဍာရေး, ယုံကြည်မှု, ဂေါပကများနှင့်ဂျာစီ: အချို့သောကုမ္ပဏီအမည်များအပါအဝင်လိုင်စင်လိုအပ်သည်။
ကန့်သတ်တာဝန်ယူမှုကိုကုမ္ပဏီများက "ကန့်သတ်" သို့မဟုတ် "Avec Responsabilite Limitee" သို့မဟုတ်၎င်းတို့၏အတိုကောက် ", Ltd" သို့မဟုတ် "SARL" တို့ပါဝင်သည်ရမည်ဖြစ်သည်။
ဘဏ္ဍာရေးဝန်ဆောင်မှုကော်မရှင်သို့အစည်းအရုံး၏စာချွန်လွှာများနှင့်ဆောင်းပါးများ Submit ။ ထို့အပြင်ရှယ်ယာရှင်များနှင့်ဒါရိုက်တာများ '' အမည်များ, လိပ်စာများနှင့်လူမျိုးများ၏အကြောင်းကြားစာပေး။ ဒါ့အပြင်အဆိုပါမှတ်ပုံတင်ရုံးလိပ်စာ, အကျိုးရှိသောပိုင်ရှင်များ '' ဇာတ်ကောင်ကိုးကားနှင့်အသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုကုမ္ပဏီ၏ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့်စပ်လျဉ်းနှင့် / သို့မဟုတ်ကုန်သွယ်လှုပ်ရှားမှုများ။
Trusts မှအဆိုပါ settlor, Trustees နှင့်ဤကဲ့သို့သွေးထိုးလှုံ့ဆော်နှင့် ပတ်သက်. သတင်းအချက်အလက်ထုတ်ဖော်ရန်လိုအပ်သည်။
ပြည်သူ့ကုမ္ပဏီများသည်လတ်တလောနှစ်ပတ်လည်အစီရင်ခံစာမိတ္တူ file ရန်လိုအပ်သည်။
နှစ်ခုရှယ်ယာရှင်များ၏တစ်ဦးကနိမ့်ဆုံးကုမ္ပဏီထည့်သွင်းရန်လိုအပ်ပါသည်။ ရှယ်ယာရှင်များနှင့် ပတ်သက်. ပြန်ကြားရေးအများပြည်သူစစ်ဆေးခြင်းများအတွက်ရရှိနိုင်ပါသည်။ ရှယ်ယာရှင်များမဆိုတိုင်းပြည်ရဲ့နိုင်ငံသားများနှင့်နေထိုင်သူများရှိနိုင်ပါသည်။
ထုတ်ပေးရှယ်ယာအမျိုးအစားများပါဝင်သည်: preference ကိုရှယ်ယာရှေးနုရှယ်ယာ, မှတ်ပုံတင်ထားသောရှယ်ယာ non-ရှေးနု၏ရှယ်ယာများနှင့်မဲပေးခွင့်နှင့်အတူသို့မဟုတ်မရှိဘဲအစုရှယ်ယာ။
တဦးတည်းညွှန်ကြားရေးမှူးကသာနိမ့်ဆုံးလိုအပ်ပါသည်။ ဒါရိုက်တာမဆိုတိုင်းပြည်ကနေတစ်ဦးချင်းစီနိုင်ပါတယ်နှင့်ဂျာစီနေထိုင်သူများဖြစ်ရန်မလိုပါ။ ကော်ပိုရိတ်အလောင်းတွေကိုလည်းနေသမျှကာလပတ်လုံးသူတို့ 1998 ၏ဂျာစီဘဏ္ဍာရေးန်ဆောင်မှုများဥပဒေအညီယုံကြည်မှုကုမ္ပဏီန်ဆောင်မှုများလုပ်ဆောင်သွားရန်ဂျာစီအတွက်လိုင်စင်နေကြသည်အဖြစ်ဒါရိုက်တာဖြစ်နိုင်သည်။
နိမ့်ဆုံးအခွင့်အာဏာဝေစုမြို့တော် 1 GBP ဖြစ်ပါတယ်။ ပုံမှန်အားဖြင့်ပြုလုပ် 10,000 GBP ဖြစ်ပါတယ်။
1 GBP (သို့မဟုတ်ညီမျှသည့်နိုင်ငံခြားငွေကြေးကို) မှာစာရင်းသွင်းသူထုတ်ပေးရှယ်ယာများ၏တန်ဖိုးနှင့်ညီမျှ။ ထုတ်ပေးရှယ်ယာငွေသားအတွက်အပြည့်အဝပေးချေရမည်ဖြစ်သည်။
တိုင်းကုမ္ပဏီထည့်သွင်းဒါမှမဟုတ်သူတို့ဖြစ်ကြသည်မဟုတ်လျှင်ဂျာစီအတွက်ကင်းလွတ်ခွင့်ကုမ္ပဏီများမှ 0% ၏ကော်ပိုရိတ်အခွန်နှုန်းကိုပေးဆောင်စဉ်းစား:
•တစ်ဦး 20% အခွန်နှုန်းကိုပေးဆောင်ရသောငှားရမ်းခြင်းနှင့်ပစ္စည်းဥစ္စာပိုင်ဆိုင်မှုဖှံ့ဖွိုးတိုးတကုမ္ပဏီများမှ;
• Utility ကိုကုမ္ပဏီများက (စသည်တို့ကိုဆိုလိုသည်မှာဓာတ်ငွေ့, လျှပ်စစ်မီး, ရေ,) တစ်ဦး 20% အခွန်နှုန်းကိုပေးဆောင်; နှင့်
•ဘဏ္ဍာရေးဝန်ဆောင်မှုများကိုပံ့ပိုးပေး (ဆိုလိုသည်မှာဘဏ်များ, ဘဏ္ဍာရေးဝန်ဆောင်မှုကုမ္ပဏီများ, ကိုး စား. , etc) တစ်ဦး 10% အခွန်နှုန်းကိုပေးဆောင်။
ဌာနေကုမ္ပဏီများသည်ဖြစ်စေဂျာစီအတွက်ထည့်သွင်းသို့မဟုတ်စီမံခန့်ခွဲခြင်းနှင့်ထိန်းချုပ်ဂျာစီနှင့်ဂျာစီအတွင်းကုန်သွယ်မှုသို့မဟုတ်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းမှာထိတွေ့ဆက်ဆံလျက်ရှိသည်။ နေထိုင်သူတစ်ဦးကုမ္ပဏီများအတွက်ကော်ပိုရိတ်အခွန်နှုန်းကိုကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းတွင်ဝင်ငွေပေါ် 20% ဖြစ်ပါတယ်။
မှတ်ချက်: အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုအခွန်ထမ်းအခြားနိုင်ငံများအနေဖြင့်အခွန်ထမ်းကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာဝင်ငွေအခွန်နှင့်အတူအားလုံးကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာဝင်ငွေများ၏ IRS ကိုအကြောင်းကြားရမည်ဖြစ်သည်။
အဆိုပါဂျာစီကုန်စည်နှင့်ဝန်ဆောင်မှုများအခွန် (GST) ကိုပြည်တွင်းမှာစားသုံးကုန်ပစ္စည်းများ (ဒေသခံသို့မဟုတ်တင်သွင်းရှိမရှိ) နှင့်ဝန်ဆောင်မှုများကိုအရောင်းအခွန်ဖြစ်ပါတယ်။ လက်ရှိနှုန်းကို 5% ဖြစ်ပါတယ်။
အစိုးရနှင့်စာရင်းစစ်ဘဏ္ဍာရေးထုတ်ပြန်ချက်များ file ရန်မလိုအပျခရှိပါသည်။ သို့သော်ရှိသမျှသောကုမ္ပဏီကုမ္ပဏီ၏စစ်မှန်တဲ့ဘဏ္ဍာရေးအခွအေနေကိုထင်ဟပ်ဘဏ္ဍာရေးမှတ်တမ်းများကိုစောင့်ရှောက်ရကြမည်။
တစ်ခုလုံးကိုဖြစ်စဉ်ကို 10 ရက် 14 ထံမှယူလိမ့်မည်ဟုမျှော်လင့်ထား။
တစ်ဦးကဂျာစီကင်းလွတ်ကုမ္ပဏီကဤအကျိုးခံစားခွင့်ကိုခံစားနိုင်သည် 100% နိုင်ငံခြားပိုင်ရှင်တွေမျှအခွန်နှစ်ခုရှယ်ယာရှင်များ, တဦးတည်းညွှန်ကြားရေးမှူး, အနိမ့်ရှယ်ယာမြို့တော်, အင်္ဂလိပ်ကသူတို့တရားဝင်ဘာသာစကားဖြစ်ပါတယ်။